Date My Pet » Fa ny fitiavana ny iray Pet
Izaho dia tena kajy olona. Ny zavatra rehetra ataoko dia tsara nomanina, fa ny zavatra rehetra ataoko dia tena stratejika. Rehefa manapa-kevitra fa te ho biby, Aho nieritreritra tsara momba ny fotoana fanoloran-tena, vola lany ara-bola miaraka amin'ny fifandraisana maharitra fa ho anay ihany hiara-. Ny zavatra tsy kajy dia ny fomba izay ny saka, Beau no hamonjy ahy.
Araka ny dimy amby roa-polo taona, Izaho no nanao ny fiainana sarotra. Ao anatiny rehetra, androko toa mamiratra sy moramora kokoa ny fahafantarana fa ny saka no niandry ahy tao an-trano. Ny fahatsapana ho manirery dia manageable toy ny Beau dia manome ny furry namana izay vonona foana ny hanome fampiononana tsy rariny. Ny andro lava amin'ny ora-biby fiompy raha lasa cuddling sady namafa ranomaso sy manome fanampiana bebe kokoa sy ny fialan-tsasatra noho ny nieritreritra aho fa ho azo atao. Ny andro lava amin'ny ora-milalao feno hehy fotoam manome fifaliana mihoatra noho nieritreritra aho fa ho azo atao. Ny fitiavana ny biby iray tena azo fanasitranana.
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny biby tiako dia ny hanampy miaraka amin'ny reny mitsaha-mitombo isa ny Fahaizana Voajanahary. Fantatro fa ny fitiavana ny biby hanampy hanova ahy ho any amin'ny reniny izay tiako ka mila ho an'ny zanako any aoriana. Beau ny fiankinana nampiseho ahy ny andraikitra sy ny fahafoizan-tena takiana mba hitaizana sy manampy mikolokolo velona iray hafa ho. Ho setriny, ny fitiavana tsy misy fepetra no nanao ahy ho tia lalina kokoa. Dia nampiseho ahy ny fitiavana fa tsy fantatro dia azo atao. Ny fitiavana ny biby tena afaka mampianatra anao ny hevitry ny fitiavana.
Ny kajy ezaka eo amin'ny fitadiavana ny biby nitarika ahy amin'ny adiny telo mitaingina fiara manerana ny fanjakan'i Michigan. Rehefa hiditra ny fanavotana, iray amin'ireo zanany amin'ny ankapobeny tonga tamiko ny marina, nametraka teo am-pofoako, ary tsy hiala. Aho nilaza. Hatramin'izany andro izany, ny saka sy ny nisy mifandray akaiky. Beau Tena namana, Saika toy ny alika-tena izy, fa milaza momba ny olona. Fihaonana ny ankamaroan'ny namako sy ny suitors nandritra ny taona maro, Beau Voaporofo indray ny fahaizany sy ny tsara indray hitsara ny olona. I, raha ny tena izy, mitodika any aminy izao hahazo fanazavana. Ny fitiavana ny biby tena afaka mampiseho ny toetra sy ny intension ny hafa.
Avy anatin 'ny ratram-trano sy ny kely tsy misy fifandraisana tamin' ny raiko no nahatonga ahy ho mihidy-eny. Noho io, rehefa mifidy ny biby, Fantatro fa tsy maintsy ho lehilahy. Ny toetra sy firaiketam-po be fitiavana izay efa nampiseho kosa Beau dia nitondra azy ho lasa tena be fitiavana saka. Ny fianteherana amiko nampiseho ahy ny fomba tena izy, dia mora izany fifandraisana. Ny fitiavana fa efa nasehony ahy Beau manome fanantenana ahy, fa efa aingam-panahy ahy ny hiresaka, ka ho lasa mora. Ny saka nampiseho tamiko fa be fitiavana ny olona iray dia manan-danja foana ny loza. Ny fitiavana iray afaka biby tena manome fanantenana.
Hawaii – Visting amin'ny biby